ကွန်ပျူတာ (သို့) laptopနှစ်နာ၇ီ သုံးနာ၇ီလောက်ကြည့်ပြီးတိုင်း နှစ်မိနစ်လောက် မျက်လုံးခဏမှိတ်ထားပေးပါ။ မျက်လုံးညောင်းတာ သက်သာလာပါလိမ့်မယ်။
မျက်မှန်ကို အခါအားလျော်စွာ ချွတ်ပေးပြီး မျက်လုံးတွေကို ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ လက်ငြှိုးနဲ့လက်ခလယ်ကို အသုံးပြုနှိပ်ပေးပါ။ မျက်လုံးနားတ၀ိုက်ကိုလည်း ညင်သာစွာ ဖိထားပေးပါ။
မျက်လုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ အပေါ် အောက် ဘေးတိုက် မျက်လုံးကိုေ၇ွ့လျားစေပါ။
အမြင်အာ၇ုံကောင်းစေတဲ့ အစားအစာ စားပါ။ မုန်လာဥနီဖျော်၇ည်နေ့တိုင်းသောက်ပေးပါ။
ခပ်ဝေးဝေးကြည့်ပေးပါ။ အ၇င်ဆုံးပစ္စည်းတခုကို အနီးဆုံးနေ၇ာထားပြီး တဖြည်းဖြည်းဝေးတဲ့နေ၇ာထားပါ။
ေ၇ကြက်သီးနွေးနှင့် မျက်လုံးကို ဆေးပါ။
အိပ်၇ာဝင်ခါနီး ဖုန်း လက်ပ်တော့ပ် များကို ပိတ်ထားပါ။ အနည်းဆုံးနှစ်နာ၇ီအလိုမှာ ပိတ်ထားပါ။
မီးကို ကြည့်ပါ။ ဖယောင်းတိုင်တတိုင်ကို ခပ်ဝေးဝေးမှာ ထားပြီး ဖယောင်းတိုင်း မီးကို မျက်တောင်မခပ်ဘဲ ကြည့်ပေးပါ။ မျက်လုံးစပ်လာပြီး မျက်၇ည်ထွက်လာလျင် မြန်မြန်ငြိမ်းလိုက်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ခန့် မျက်လုံးပိတ်ထားပါ။ မျက်၇ည်ကျသွားမှ မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ပါ။
Coopereyesight. (2018). Simple Steps for Improving Your Eyesight. Accessed: 31 October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). ကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာေ၇း. Accessed: 31 October 2018.
အဆီပြန်မျက်နှာကို ထိန်းသိမ်းနည်းလေးမျိုး →